नेपाललाई विदेशमा कसरी चिनाउने? :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
नेपाललाई विदेशमा कसरी चिनाउने?
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, माघ १७
सन् २०१७ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या १० लाख पुगेको सरकारी निकायको दाबी छ। अबको दुई वर्षभित्र वार्षिक २० लाख पर्यटक र १२ वर्षभित्र ३० लाख विदेशीलाई वर्षमा नेपालमा स्वागत गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।
तर यो वर्ष जम्मा १० लाख मात्र आए। सन् १९९९ मा तय भएको उक्त लक्ष्य अहिले आएर बल्ल पुरा भएको छ।
नेपालमा बढीभन्दा बढी विदेशीलाई भ्रमण गराउन सबैभन्दा पहिले प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ। सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने भनेर घोषणा गरेको पर्यटन बोर्डले सन् २०१८ मा एक्सपेरियन्स नेपाल अभियान सुरू गरेको छ।
यो अभियान सन् २०१९ भर चल्ने छ।
विश्वभर नेपालको प्रचारप्रसार गरी नेपालको बारेमा जानकारी दिने उक्त अभियानको संयोजक भने आयरल्यान्डमा बसोबास गर्ने तथा बोर्डका पिआरआर दिपेशमान शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ।
समग्र नेपालभित्रका सम्पदा तथा संस्कृतिको अनुभव गर्न विदेशीलाई आमन्त्रण गर्ने यो अभियानको मुख्य लक्ष्य भएको शाक्यको भनाइ छ।
‘एक्सपियसरिन्स नेपाल भनेको नेपलामा भएका स्रोत र सम्पदाको अनुभव गर्न आउ भन्ने अभियान हो’शाक्यले भने,‘यसमा खाना, सम्पदा, कला, संगीत, हिमाल पर्छ।’
सन् २०२० मा हुने भिजिट नेपालको पूर्व तयारीका रुपमा हेरिएको यो अभियान त्यसैको सारथी हुने अपेक्षा गरिएको छ। भ्रमण वर्षका लागि भन्दै काठमाडौंमै सेमिनार गर्ने, समिति बनाउने विगतको अभ्यासमा केही फेरबदलको संकेत पर्यटन बोर्डले दिएको छ। तर पनि यसले परिणाम के दिन्छ भन्ने नै मुख्य हो।
यो अभियान नेपालका सबै सम्पदाको प्रबद्र्धन भए पनि नेपाली खाना र त्यस्ता परिणामबाट नेपालीपनको प्रबद्र्धन हो।
‘हामीले यसलाई खानामा केन्द्रित गर्न खोजेका छौं तर यसमा सबै हुन्छ’ अभियानका संयोजक शाक्यले भने।
यसअघि सन् २०१७ मा घोषणा गरिएको भिजिट नेपाल इन युरोप संयोजक पनि शाक्य नै थिए। त्यही सफलताबाट यो अभियान पनि सफल हुनेमा विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ।
अर्थात नेपाली खानाका परिकारमार्फत् नेपाली पर्यटनको प्रबद्र्धन यो अभियानको उद्धेश्य हो।
नेपाल बाहिर नेपालीले सञ्चालन गरेका ३ हजारभन्दा बढी रेष्टुरेन्ट भएको तर त्यहाँ अहिले नेपालीको नाममा भारतीय खानाका परिकार पाकिरहेका छन्। त्यस्ता ठाउँमा उपयुक्त परिकारको विकास भएपछि सानासाना परिवर्तनको लागि आग्रह गरिने शाक्यले जानकारी दिए।
‘नेपाली नियोग, संसारभर छरिएर रहेको नेपाली डायस्पोरालाई अलिकति मात्र पनि उपयोग गर्ने हो भने सफलता पाउन सकिन्छ भन्ने पाठ युरोपमा लिएका छौं’ उनले भने,‘त्यसको अलिकति आयातन बढाउनेवित्तिकै हामी सफल हुन्छौं।’
नेपालमा रहेको टिमले परिकार फाइनल गरेपछि अभियाने त्यसको बनाउने तरीका तथा आवस्यक सामग्रीसहितको भिडियो सामग्री बनाउने छ। जुन इच्छुक रेष्टुरेन्टलाई अभियानको संयोजन समितिले पठाउने छ।
नेपालको रैथाने स्वाद नहराउनेगरी परिकारलाईस्थानीयकरण वा विश्वव्यापीकरण गरेरमात्र त्यसरी विश्वबजारमा लिन सकिने शाक्यको भनाइ छ।
‘यो एकैपटक हुँदैन स्टेप वाइज स्टेप हुन्छ’ उनले भने,‘हामी यसमा सकेसम्म प्रयास गर्छौ।’
नेपाली स्वादलाई विश्वभर रहेको रेष्टुरेन्टमा नेपाली परिकारको रुपमा राख्न सकिएमा त्यसले नेपालको आफैं प्रचार गर्ने अभियानका संयोजकको विश्वास छ।
नेपालीले चलाएका रेष्टुरेन्टबाट सुरु गरेर भविष्यमा नेपाली खाना वा स्वादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानको अन्तिम लक्ष्य भएको शाक्यको भनाइ छ।
‘विश्वका धेरै ट्राफिक हुने विमानस्थलमा नेपाली खानाका रेष्टुरेन्ट होउन् हाम्रो लक्ष्य त्यही हो’ शाक्यले भने,‘तर यसको सुरुवात हामीले भारतीयसँग मिसाएर राखिएका मेन्यूबाटै स्वतन्त्त अस्तिन्व सिर्जना गर्नुपर्ने छ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १६, २०७४, १०:४०:१९